रिलिज मिति सर्दा ‘इच्छा’ लाई झन् फाईदा ! « Mazzako Online
रिलिज मिति सर्दा ‘इच्छा’ लाई झन् फाईदा !
मज्जाको अनलाईन समाचार, काठमाण्डौं, माघ २३–
रिलिज मिति सरेर माघ २ बाट नेपाली फाल्गुण आठमा पुगेको चलचित्र ‘इच्छा’ का निर्देशक मुनाल घिमिरेले रिलिज मिति सर्दा झन् फाईदा भएको बताएका छन् । संविधान जारी हुने दिन नजिकिँदै गर्दा बन्द र हडतालको चपेटामा परेको ‘इच्छा’को अब रिलिज हुने मिति सबै किसिमबाट उत्तम रहेको उनले बताएका छन् ।
मुनाल भन्छन्, ‘मिति सर्दा चलचित्रलाई झन् फाईदा भएको छ । बन्दले तनाव दिएको थियो । जाडो पनि धेरै नै थियो, जसका कारण बिहान र बेलुकाका शोहरुमा दर्शक आउन गाह्रो थियो । अहिले बन्द पनि छैन, जाडो पनि घटिसक्छ’ । चलचित्रको राम्रो को लागी नै माघ २ को रिलिजको बेला विविध अप्ठ्याराहरुले घेरेको आफुले महशुस गरेको उनले बताए ।
चलचित्रको प्रचार-प्रसारको अन्तिम चरणमा आएर रिलिज रोकिएको थियो । मुनालले प्रचार-प्रसारमा पनि बढि समय पाएको बताए । ‘मिडियामा एक हिसाबको प्रचार-प्रसार भएकै छ । अब देश दौडाहामा लाग्छौँ’ घिमिरेले बताए ।
त्यस्तै चलचित्रका निर्माता प्रकाश घिमिरेले आफुलाई माघको रिलिजबाट जति आशा थियो त्यो भन्दा बढि अहिले आशा रहेको उल्लेख गरे । पहिलेको भन्दा अहिलेको रिलिज मिति उत्तम हुनुले नै आशा बढाएको ‘इच्छा’का निर्माता घिमिरेले बताए ।
चलचित्र इच्छामा दयाहाङ् राई, सुवास थापा, शिखा शाहि लगाएतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।